सुत्केरी हुने समय नजिकिएसँगै हिँडडुल गर्न थालिन् करिना, ठूलो बेबी बम्पु देखेर धेरैले भने ‘जुम्ल्याहा वच्चाा छन् र ? – Sandesh Press
सुत्केरी हुने समय नजिकिएसँगै हिँडडुल गर्न थालिन् करिना, ठूलो बेबी बम्पु देखेर धेरैले भने ‘जुम्ल्याहा वच्चाा छन् र ?
January 8, 2021 162
करिना र सैफले आफ्नो सन्तानलाई घर भित्र्याउनका लागि तयारी पनि सुरु गरिसकेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।कारोना महामारीमा पनि सुटिगंमा ब्यस्त रहेकी नायिका करिना कपुर महामारीकै समयमा दोस्रो पटक आमा बन्ने तरखरमा छिन् । कोरोनाले गर्दा खासै बाहिर नहिँडेकी करिना पछिल्ला दिनमा भने फाट्ट फुट्ट रुपमा निस्किन थालेकी छिन् । हालै उनलाई घर बाहिर हिँडिरहेको अवस्थामा भेटियो ।
Prevअमेरिका पठाउँछु भन्दै लाखौं ठग्ने युवती पक्राउ
Nextजिपले बाइकलाइ ठ’क्कर दिदा बाइकमा सभार दुईजनाको मृ’त्यु